Ndị na-emepụta Intel Kaby Lake | Esi m mac
Lake Kaby, ọgbọ na-esote Intel processors
N'ezie, ihe karịrị otu n'ime unu na-eche otu ihe ahụ ka m banyere ọkwa a banyere ọgbọ ọhụrụ nke Intel processors, Hà ga-abịa Mac n'oge na-adịghị anya ka ọ ga - eme otu ihe ahụ dị ka ọ dị na Skylake ugbu a?
Ọfọn ebe a ka anyị rụtụ aka n'ọtụtụ okwu na ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na Intel kwalitere ndị nrụpụta ọhụụ na-eji usoro 14 nm eme ihe n'oge, Apple's Macs so na ndị ikpeazụ na-etinye ha na ụfọdụ ụfọdụ ka dịkwa taa. mbipute, ọgbọ nke isii aha ya bụ Haswell.
N'oge ahụ ihe a maara banyere ndị nrụpụta ọhụrụ a bụ na ha agaghị abịa n'oge na-adịghị anya ma ọ ga-arụ ọrụ nke ọma n'ihe metụtara njikwa akụ na arụmọrụ. Eziokwu ọzọ dị ịrịba ama bụ na ndị nhazi a ga-esi n'aka Intel 200 Serires chipset na ga-enwe otu oghere LGA 1151 nke na-eji Skylake ga-agbakwunye nhọrọ ndị ọzọ na bọs ntinye / mbupute na-enye ohere ruo 24 PCIe 3.9, ruo njikọ 6 SATA 3.0 6 Gbps na ọdụ ụgbọ mmiri 10 USB 3.0.
O doro anya na arụmọrụ bụ gafere 5 ma ọ bụ 10% jiri ya tụnyere ụdị nke ugbu a. Ihe nkowa ozo gbasara 5K na Thunderbolt 3 ọdụ ụgbọ mmiri, ebe ọ bụ na ihe nrịbama 5K na ndị nhazi a, nkwado agbakwunyere maka ntanetị 60HZ na ọbụnadị ihu abụọ na 30Hz ga-abata.
Na ụkpụrụ, a ga-emeziwanye ihe niile ma meziwanye maka ịrụ ọrụ ka ukwuu na ịrụ ọrụ ike ka mma, mana nke a na-ewe ogologo oge kemgbe, dị ka akọwara, ndị na-arụ ọrụ Kaby Lake mbụ na-atụ anya ịmalite ịbịaru. n'oge nke anọ nke afọ 2016. Mgbe ahụ, anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na Apple na-agbakwunye ha na Macs ma ọ bụ na ọ bụghị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Lake Kaby, ọgbọ na-esote Intel processors
A na-agba Jimmy Iovine ajụjụ ọnụ na CBS This Morning iji kwuo banyere Apple Music na mgbasa ozi ahịa ya
Ndị ọrụ nwere afọ ojuju na 12-inch MacBook